In Ka Badan 100 Ruux oo Dhintay Kadib Dhul Gariir Ku Dhuftay Ciraaq. – Shabakadda Amiirnuur
November 13, 2017 5:23 am by admin Views: 113
Dhul gariir culus ayaa ku dhiftay wadanka Ciraaq kaasoo sababay khasaarooyin badan oo isugu jira dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo wax yeellooyin kale oo ay adag tahay in si fudud lagu tira koobo.
Dhulgariirkan oo uu cabirkiisu yahay 7.3 darajo ayaa ku dhuftay deegaannada dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka Ciraaq iyo Iiraan. Wararka ayaa sheegaya inuu dhul gariirku kasoo bilowday dalka Ciraaq isagoo gaaray gudaha dalka Iiraan, wuxuuna sababay dhimashada inkabadan 100 Ruux iyo dhaawaca tira kale.
Magaalada Sarab Al-Dahab oo 15KM ka fog xuduuda Ciraaq kuna taalla gudaha Iiraan ayaa waxaa ku dhintay dad farabadan oo Iiraaniyiin ah, waxaana Telefeshinka Iirana uusoo gudbinaya muuqaallada goobaha uu dhul gariirku ku dhuftay.
Hay’adda qaabilsan arimaha dhulgariirka iyo musiibooyinka ee fadhigeedu yahay Maraykanka ayaa xaqiijisay in dhul-gariirka uu kasoo billowday magaalo lagu magacaabo Xalbaja, uuna kusii fiday illaa iyo gudaha Iiraan. 160 Ruux ayaa illaa iyo hadda la xaqiijiyay dhimashadooda, halka inkabadan 1000 Ruuxna ay dhaawacyo soo gaareen, waxaana weli socoda baaritaanno lagu raadinayo dad meydad ah. Dhulgariirkan oo socoday dhowr daqiiqo ayaa sababay in korontada la isticmaalayay ay go’do, taas oo sii badisay dhibaatada.